Maamulka Degmada Bossaso oo ka Jawaabey Cabashada Timajarayaasha (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 18, 2017 6:42 g 2
Maamulka degmada Bosaaso ayaa ka hadlay ajaaniib Hindi iyo Bangaaladheesh ah oo meherado ganacsi oo lagu jaro timaha ka furtay Bosaaso. Arrintan ayaa sababtay in ay ka gadoodaan muwaadiniin timajarayaal reer Puntland ah oo meherado ganacsi oo noocan oo kale ah ku haysta magaalada Bosaaso, ayna hadda soo foodsaartay shaqo la’aan baahsan maadaama macaamiishii lagala wareegay.
Mamulka waxaan weydiinay ajaanibta ma ku joogaan Puntland sharci mise sifo sharci darro ah, mise leeyihiin sharci ay dalka kaga shaqaysan karaan oo ay meherado ganacsi kaga furan karaan? muxuuse maamulka degmada Bosaaso kala socdaan arrimahaan ganacsi ee ajaaniibta Bossaso.
Su’aalahaas iyo kuwa kale waxaan weydiinay oo ka jawaabay Guddoomiye Kuxigeenka degmada Bosaaso Siciid Cabdiraxmaan Maxamed Cali, waxaana waraystay wariye Xasan Heykal.
Hãýķăł Hãýķâł 2 years
Ajaanibta waa in loo sameya aqoosi buuxa si ay u shaqeestaan
Abdiqaadir Coondhe Saydka 2 years
haa wayku bateen tima jarayaashu ad bay uqabsadeen bosaso meel kasta way joogaan ee hala yareeyo